WAA MAXAY ROODHIDA: FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELLADA CAAFIMAADKA AADANAHA - BOW
Shallots Dad badan ayaa jecel sababta oo ah jilicsanaanta, jilicsan iyo dhadhanka macaan, taas oo aan sabab u lahayn urka cuntada ka dib. Intaa waxaa dheer, cagaarka iyo basasha ma keenaan ilmo marka la jarjaray, marka loo eego basasha caadiga ah.
Waa maxay boorka
Sidaa darteed, jaranjarada, waa maxay? Shallot - a warshad dilka ah ee qoyska basasha, basasha ee kaas oo la ururiyey ee lobules, taas oo ka dhigaysa in ay u eg sida toon. Saliideedu waxay leeyihiin qaab fara badan oo miisaankoodu ka badan yahay 50 garaam. Shallooyinka ayaa badanaa ku kordhay sababtoo ah cagaarsho: baaldi jilicsan iyo khafiif ah oo leh dhadhan khafiif ah oo aan lahayn fiiq. Warshadu si dhakhso ah ayuu u raraa oo si fiican loo kaydiyaa, baadadku waxay u koraan si aan caadi ahayn, oo kuu oggolaanaya inaad soo gurto cagaarka jilicsan. Aasiya waxaa loo tixgeliyaa inay tahay meesha lagu magacaabo berrito, inkastoo maanta geedka waxaa si guul leh loogu beeray Europe, Caucasus, iyo sidoo kale Ukraine, Moldova iyo Ruushka.
Shallots: Kalori, Halabuurka iyo qiimaha nafaqada
Shallot waxaa loo tixgeliyaa badeecad cunto, waxay leedahay tilmaamo yaryar oo qiimo tamareed. Waxyaabaha kalooriga ah ee kaararka ah per 100 grams oo badeecada ah: 17-19 Kcal oo cagaaran iyo 33-36 Kcal ee nalalka. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay ka kooban tahay kalooriyada yar, qiimaha nafaqada ee basasha waa dukaanka dhabta ah ee xubno waxtar leh. Kaliya 100 garaam oo badeecada ah ayaa jira: biyo 79.8 g, borotiinka 2.5 g, carbohydrates 16.8 g, ash 0.8 g.
Waxaa intaa dheer, halabuurka ee basal dufan ah waxaa ku jira micro iyo macroelaska: potassium iyo copper; manganis iyo kalsiyum; birta iyo magnesium, selenium iyo sodium; iyo sidoo kale fosfooraska. Warshadu waxay hodan ku tahay saliidaha lagama maarmaanka ah, phytoncides, macdanta iyo cusbada, carotenoids. Shallots waxaa ku jira fitamiinada kooxda B, fitamiin A iyo C, fitamiin PP.
Ma taqaanaa? Dalagyada basasha ayaa ah kuwa ugu caamsan adduunka. Sida laga soo xigtay cilmi baarista Qaramada Midoobay, waxaa lagu koray in ka badan 175 dal, iyo dalagga Basasha waxay ka badan tahay xitaa dhalid sarreen, koray adduunka.
Faa'iidooyinka dabiiciga ah ee dadka
Qalabka faa'iidada ee geedi-socodka ayaa u oggolaanaya in loo isticmaalo daaweynta cuduro badan. Badeecadu waxay leedahay tayada cuntada, oo ay ku jirto ilaa 4% sonkor. Calcium iyo fosfooraska waxay xoojinayaan unugyada lafta jidhka iyada oo si joogto ah loo isticmaalo. Ascorbic acid, kaas oo sidoo kale ku jira qayb ka mid ah, wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo xoojin lahaa nidaamka difaaca, iyo phytoncides waxay ka caawisaa in ay la dagaallamaan calaamadaha qabow oo aan lagama maarmaan u laheyn fitamiin la'aanta, maadaama ay yihiin walxo la dagaalamaya bakteeriyada jiran.
Raadi walxaha iyo folic acid ee dhirta, waxay ka dhigtaa mid aad u faa'iido badan oo loo isticmaalo dumarka uurka leh. Calcium wuxuu taageersan yahay wuxuuna ka caawiyaa samaynta unugyada lafaha ee uurjiifka iyo waliba aaladda folic acid waxay ka hortagtaa koritaanka cudurada inta lagu jiro uurka. Sidoo kale basasha waa tallaabo aad u fiican oo looga hortago infalawansada isla markaana loo isticmaalo sida wakiilka anti-bararka.
Sidee loo isticmaali karaa jarjar daawada dhaqameedka
Daawooyinka dadweynaha, karbuunada waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurrada loona wanaajiyo xaaladaha marinnada dhiigga, iyo sidoo kale si caadi ah cadaadiska. Basasha ayaa sidoo kale faa'iido leh hawlaha wadnaha, maadaama ay yihiin ili ah sodium iyo potassium. Warshadu waxay faa'iido u leedahay dadka qaba dhibaatooyinka leh dheef-shiid kiimikaad, sababtoo ah waxay ka qayb qaadataa dheecaanka casiirka gastric, taas oo hagaajineysa shaqada ee nidaamka dheefshiidka. Marka lagu daro cuntooyinka duxda badan, basasha waxay u shaqeeyaan sidii xayndaab, ka caawinta burburinta dufanka iyo hagaajinta dheef-shiidka jirka. Carotene, oo ah qayb ka mid ah dhirta ayaa hagaajinaysa shaqada muruqyada indhaha, gobolka ee muraayadda iyo retina.
Waa muhiim! Basasha ma soo celin aragga, laakiin, si joogto ah u isticmaalkeeda waa u wanaagsan yahay indhaha.
Daawo dhaqameed ayaa kugula talineysa isticmaalka jaraa'idka dadka waayeelka ah, sababtoo ah sharaxaadiisa ayaa sidoo kale ah xoojinta guryaha. Ahaanshaha antioxidant, basasha waxay ka qaadaa sunta sunta waxayna ka hortagtaa da'da unugyada.
Intaa waxaa dheer, waxay hagaajinaysaa waxqabadka unugyada maskaxda, xasuusta oo saameyn togan ku yeesha guud ahaan jirka. Casiirka basasha waxaa si fiican loo isticmaalaa dawooyinka dadweynaha sida dabka iyo boogta-bogsashada, iyo sidoo kale qaar ka mid ah indhaha iyo infekshanka gastric waa la daweynayaa.
Dareemka dhedhicilka ee nalalka iyo maskaxda jilicsan ee saxaradooda waxay samaysaa qashin ku habboon isticmaalka cusub, tusaale ahaan, cagaarka iyo khudaarta cagaaran. In dhirta this jirin sharoobada iyo caraf udgoon, sidaas darteed marka wax lagu karsado ma joojinayso dhadhanka maaddooyinka ugu muhiimsan. Basasha ayaa lagu daraa suunka koowaad iyo labaad, marinades iyo pickles. Basasha waxaa loo isticmaalaa sida buuxsamida pies iyo pies, ka samee suugo iyo dharka ka soo baxa. Basasha waxay u diyaariyaan maraqa iyo suxuunta dhinaca hilibka iyo kalluunka, qudaarta qudaarta (canjeelo iyo la kariyey).
Xiiso leh Cuntooyinka suxuunta leh ee basasha ayaa lagu sharxay buugaagta buugaagta ee Mesopotamia, taas oo ay raacdo in dadka maxalliga ahi jecel yahiin oo keliya basasha, laakiin sidoo kale jarjar, dhoobo iyo toon.
Sida loo keydiyo geedo
Goosashada geedka waxay bilaabmaysaa marka caleemaha ay qallalayaan wax ka badan nus. Basasha bislaaday waa la qoday, qalajiyey dhawr maalmood kadibna kala tagay. Caleemaha waa la gooyaa, basasha ayaa lagu daboolaa sanduuqyada waxayna ku kaydsan yihiin qol qallalan, heerkul yar oo ka hooseeya heerkulka qolka.
Waa muhiim! Ha ka walaacin ururinta jaranjarrada, haddii kale baqdintu waxay noqon doontaa mid adag oo adag.
Nalalka waxaa mararka qaarkood lagu xiraa qalfoof, ka dib markaad qalajiso. Badanaa basasha waa la qaboojiyey jiilaalka, taas oo ay ugu horeysay qoyaan, ka dibna ku duubnaa weel balaastig ah oo la qaboojiyey, lagu keydiyay qaboojiye. Si la mid ah ayaa la goostay oo baadad.
Ma jiraan wax khilaafaad adag oo adag, laakiin waxaa jira waxoogaa xaddidan. Ha isticmaalin baadad ee dhirta marka ay jiraan dhibaatooyin xagga nidaamka uruurinta iyo habka caloosha iyo mindhicirka. Basasha waxay kordhisaa kiimikada cabitaanka calafka, sidaas awgeedna dhirta unugyada dheefshiidka, iyo in badan oo ka mid ah dhirta jidhka ku jira waxay adkeyn kartaa in kaadida. Shallotiinta laguma talinayo dadka ku dhacaya calool adag ama ay dhibaato ka haysato beeryaradu.
Haddii aad raadinayso taariikhda dheer-dheer, waxay soo baxday in dadkani ay cuneen cagaar badan. Shallots waa wakiil qurux badan oo faa'iido leh, iyo ugu muhiimsan, cagaarka kaheli leh. Way fududahay in lagu koro beerta iyo deegaanka gudaha.